Yongeza i-franchise mahala
Iklabhu yezemidlalo yabantwana
Indawo yokuhlala yabantwana
Ipuli yokudada yabantwana
Iziko lezemfundo labantwana
Izikolo zebhola yabantwana
Ukutya kwabantwana esitratweni
Isikolo semfundo ephakamileyo
Iinkonzo zemibhobho yamanzi
Iklabhu yebhola ekhatywayo
Iklabhu yobugcisa bokulwa
Iklabhu yomdlalo wamanqindi
Ivenkile yeempahla zemidlalo
Ivenkile yezemidlalo yokutya
Ivenkile ekwi-Intanethi kwi-Instagram
Ivenkile yeebhatyi zoboya
Ivenkile yezambatho kunye nezihlangu
Imveliso yezinto zokwakha
Imveliso yokujija ngokwakho
Ukuveliswa kweekhemikhali zasekhaya
Ukuveliswa kweemveliso zeplastiki
Ukuveliswa kweendawo zokudlala
Ukuveliswa kwempahla yemichiza
Ukuveliswa kwephepha langasese
Ukuveliswa kwezakhiwo zentsimbi
Ukuveliswa kwezitena eziguqukayo
Ivenkile yamalungu azenzekelayo
Ivenkile yezixhobo zemoto
Ivenkile eqingqiweyo yamaxabiso
Ivenkile yeempahla zombane
Ivenkile yeerekhodi yeVinyl
Ivenkile yempahla yasekhaya
Ivenkile yesonka samasi
Ivenkile yevenkile yokutya
Ivenkile yezobunjineli yococeko
Ivenkile yokugcina izinto
Ivenkile yokugcina izixhobo zasekhaya
Ivenkile yokutya kwaselwandle
Ivenkile yokuzila ukutya
Ukukhanya kwenyanga kusamile
Indawo yokutyela yaseGeorgia
Indawo yokutyela yaseNtaliyane
Indawo yokutyela yaseTurkey
Indawo yokutyela yaseVietnam
Ivenkile yokugcina izinto phantsi
UTangara da Serra
IBandar Seri Begawan
ICasalvecchio di Puglia
ISri Jayawardenepura Kotte
ICagayan de Oro
Amagama omnxeba we Dertas
ISt. Petersburg FAKA KWI-TBCITES (id, id_tbCountries, name, id_tbLangs, sysname) VALUES (USA)
IFrankfurt am Main
UFröndenberg an der Ruhr
Agidel kwezinye iilwimi
Uluhlu lwamagama egama Leninogorsk
Umndilili weAkhtuba RP
Imigdal ha Emek
IDar es Salaam
I-Pickles ihamba kancinci
Ichibi eligoso 2
Utshayelwe waya ngaphandle
Akukho ntlawulo yokuqala yesixa-mali
Isixa semali franchise
Utyalomali luyafuneka $
Ubuncinci botyalomali ukuya kuthi ga kwi-500 leedola
Ezona franchise zibiza ngaphantsi kwe- $ 1000
Iindleko eziphantsi kwee-franchise ukuya kuthi ga kwi-2000 yeedola
Utyalomali oluncinci phantsi kwe- $ 4000
Ixabiso eliphantsi litsaliwe laya kuthi ga kwi-10000 yeedola
I-Franchise yotyalo-mali oluncinci ukuya kuthi ga kwi-20000 yeedola
Uqoqosho franchise ukuya kuthi ga kwi-30000
Ukuncitshiswa okuncinci ukuya kuthi ga kwi-40000 yeedola
Iifranchise zeshishini zibiza ixabiso eliphantsi kwe- $ 50000
Ishishini notyalo-mali ukuya kuthi ga kwi-75000 leedola
Inkulu idonsa ukuya kuthi ga kwi-100,000 yeedola
Amafranchise amakhulu ngaphezulu kwe- $ 100,000
Intengiso Franchise kunye nasebukhosini
Iifranchise ezibhatalwa ngokukhawuleza-kwinyanga e-1
Ukuhlawula ngokukhawuleza iifranchise-ukusuka kwinyanga enye ukuya kwiinyanga ezi-3
Ukuhlawula i-franchise ukusuka kwiinyanga ezi-4 ukuya kunyaka omnye
Ixesha lokuhlawula i-franchise lingaphezulu konyaka omnye
Unokukhetha amaxabiso amaninzi
Ilungelo labasetyhini lokushishina
Kwiidolophu ezincinci, iindawo ezincinci zokuhlala, idolophu encinci
I-franchise yasekhaya. Ungasebenza ekhaya
Inenzuzo, i-franchise enenzuzo enkulu
Vula ivenkile yokuthengisa
Iivenkile ezineempahla ezingabizi kakhulu
I-franchise ekwi-Intanethi, ivenkile ekwi-intanethi
I-Franchise ukusuka ekuqaleni
Usebenze ixesha elingakanani umbutho
1 ukuya kwi-3 yeminyaka ubudala
Uneminyaka emi-4 ukuya kweli-10 ubudala
Uneminyaka emi-11 ukuya kweli-20 ubudala
Ngaphezulu kweminyaka eli-20
Khangela ngegama lophawu kunye nesicatshulwa sentengiso. Unokukhangela amanqaku akho.
Bhalisa okanye ungene ukuze usebenzise iinkcukacha zakho
Ileta ayikhange ijongwe
Kukho imiyalezo emitsha kum
Bonisa zonke iindlela zokukhangela
Iintengiso zifunyenwe: 983
Inkqubo yeAccounting Accounting
Intlawulo yokuqala: 0 $
Utyalomali luyafuneka: 0 $
Ubukhosi: 0 $
Ukuhlawula. Inani leenyanga: 1
Udidi: Iinkqubo, Accounting
Iinkqubo zalo naluphi na uhlobo lweshishini! Akunakwenzeka kwishishini ngaphandle kwesoftware ukulawula umsebenzi weshishini kunye nawo onke amanqanaba omsebenzi. Yonke imihla inkampani enjalo ingena kwilahleko enkulu kuba ayinakho ukuphonononga ubuthathaka bayo kwaye iyiphucule. Ikhonkco elibuthathaka linokuba yiyo nantoni na: into engathandekiyo umbutho oqhubeka uyithenga uyithengisa; Inkonzo engazisi inzuzo elindelekileyo ngenxa yentengiso embi; Abasebenzi beshishini, abasebenza ngokufanelekileyo bengonelanga; nokunye okuninzi. Yiba ngummeli kwilizwe lakho okanye kwisixeko sakho kwaye uzuze kwelona candelo linyibilikayo kwishishini!
Ngaba ikhona ividiyo
Jonga inkcazo epheleleyo
Ungathenga ukufikelela kwepremiyamu ukuze ubone iinkcukacha
Utyalomali luyafuneka: 8000 $
Ukuhlawula. Inani leenyanga: 8
Udidi: Iindawo ezizenzekelayo
Inkampani kaMakey ibiphuhlisa ngempumelelo ngaphezulu kweminyaka engama-20 kwaye ithathwa ngokufanelekileyo njengomnye wabakhokeli abaphambili beharddashery yesikhumba, izixhobo zeshishini kunye nezinto zangaphakathi. Siyawaxabisa amagcisa ethu kwaye siyazingca ngawo, kuba kungenxa yemizamo yawo yokuba uphawu lwethu luyabonakala, kwaye iimveliso zikwimfuno engagungqiyo kungekuphela eBelarus, kodwa nakwamanye amazwe. Oku, nangona kunjalo, kuyindalo, kuba inkampani yethu isebenzisa iinkosi ezinesiphiwo ngemfundo yobugcisa. I-Makey Franchise "I-Makey" sisibonelelo esikhethekileyo kwimarike yokuthengisa ngentengiso yezikhumbuzo zezikhumba ezenziwe ngezandla. -Sibonelela ngezisombululo esele zilungile zokuqalisa ishishini, eyona inomtsalane kakhulu kutyalo-mali, ngamaxabiso abuyiselweyo. I-Makey-Sikunceda ufumane indawo efanelekileyo kwintengiso. Sinikezela ngemizobo kunye nokukhetha ngokufanelekileyo indawo yezixhobo zorhwebo.
Intlawulo yokuqala: 4500 $
Utyalomali luyafuneka: 4000 $
Ukuhlawula. Inani leenyanga: 6
Udidi: Iziko lezemfundo labantwana, Ukukhula komntwana
Iziko lophuhliso lwabantwana laseLesenka lilizwe lemimangaliso kunye neentsomi, izinto zokuqala kunye nolwazi lomntwana. Kwigumbi lokufundela kwiZiko loPhuhliso lwaBantwana aBasaqalayo, abantwana babonisa iitalente zabo kunye nobuchule, kwaye batyebisa ilizwe labo leemvakalelo. Into efunyanwa ngumfaki-sicelo waseLesenka ngesixa semali esihlawulelwayo: uncedo ekuququzeleleni iziko lophuhliso lwabantwana (iimfuno zesakhiwo, isicwangciso sokuvula, uluhlu lwezixhobo, ukuthotyelwa kwemigaqo yezobugcisa, izinto kunye nezibonelelo ngamaxabiso ancitshisiweyo, umbutho womsebenzi) ; isicwangciso seshishini seziko iminyaka emibini; uncedo ekukhetheni nasekuvavanyeni abasebenzi; uqeqesho kunye noqeqesho olusebenzayo lwabasebenzi ngokwamaziko akhoyo; inkqubo yoqeqesho eyodwa eyenza ithuba lokhuphiswano; inkxaso eqhubekayo; iinkqubo zokukhuthaza nokwazisa;
Utyalomali luyafuneka: 10800 $
Ukuhlawula. Inani leenyanga: 12
Inkcazo ye-franchise yi-franchisor: I-EUROCECHOL franchise lithuba lokuqala ishishini lakho elinenzuzo ngotyalo-mali oluncinci! Umthengi onokubakho uhlala emva kwayo yonke iminyango, kuba kunzima ukucinga iofisi, indawo yokuhlala, indlu, idacha, ikhefi okanye indawo yokutyela ngaphandle kwefenitshala ephakanyisiweyo. Umzekelo olula wokubala ubungakanani bemakethi ye-Eurocovers kwisixeko sakho: Masithi inani labemi besixeko ngabantu abangama-300,000, usapho oluqhelekileyo ngabantu aba-4. Iyonke: Iintsapho ezingama-75,000. Ngokwezibikezelo ezingenathemba, kuphela iipesenti ezi-2 zeentsapho eziya kuba ngabathengi bakho kunyaka, okuyi-1,500 iitshekhi. I-avareji itshekhi kwiivenkile zethu yi-USD 123, i-USD 184,300 kumndilili wengeniso yonyaka, okt. $ 15,360 ngenyanga. I-2% elandelayo iya kuba ngabathengi bakho kulo nyaka uzayo, kwaye umjikelo wokuthenga ophindaphindiweyo we-Eurocovers yiminyaka emi-3-5 ngokwe-avareji. I-Frocoise Franchise I-Eurocovers zezi: 1. Iimpahla ezizodwa Inkampani ngumhambisi okhethekileyo wee-Eurocovers eRashiya.
Intlawulo yokuqala: 2500 $
Utyalomali luyafuneka: 30000 $
Ubukhosi: 225 $
Ukuhlawula. Inani leenyanga: 18
Udidi: Iimpahla zomntwana, Ivenkile yempahla
Inkcazo ye-franchise ngumgcini-franchisor: Uphawu lwabantwana lwe-LDCP (iLa Compagnie de Petits - uguqulo lwegama "kwinkampani yabantwana") luphawu lwesahlulo senxalenye yenkampani yaseFrance i-H3M SAS, esasazwa ngokukodwa kwiivenkile ezinophawu olusebenzayo Kwimodeli ye-franchise. Zingaphezu kwama-250 iivenkile ezinophawu lwe-LDCP emhlabeni (iivenkile zolu phawu zivulekile eFrance, e-Itali, eSpain, eSwitzerland, eJamani, eBelgium, eChina, eHong Kong, eMzantsi Afrika, njl. ERashiya, ivenkile yokuqala yavulwa ngeyoMsintsi ngo-2015 eKrasnodar, eMoscow ngoDisemba ka-2015. Petits iimeko zokusebenza iimpahla ze-LDCP ziyathengiswa kwiivenkile ezinophawu, ezingahanjiswanga kwiivenkile ezininzi nakwi-Intanethi. Imodeli yeshishini yi-franchise. Uyilo lwevenkile ngokungqongqo ngokungqinelana nomxholo wenkampani kwaye lubonelelwa ngesiseko sokujika. Indawo encinci yokugcina i-60 sq.m. Kwimimandla, inkampani ibonelela ngokukodwa esixekweni (okanye kwingingqi). Ukuveliswa kwezixhobo zorhwebo kungqinisiswa luphawu kwaye kungathengiswa eRashiya.
Thenga ilungelo lokuthengisa
Ukuthenga i-franchise kulula, eyona nto ibalulekileyo kukukhetha imodeli yeshishini ekufaneleyo. Ungathenga yonke into oyifunayo nge-franchise, kuba, njengomthetho, unikwa ibhloko yonke yolwazi olufanelekileyo lokuqala kwishishini. Ukuthenga i-franchise kuluncedo kuba ungaqala ishishini elizisa inqanaba lenzuzo ngaphandle kweendleko zokuthengisa. Umthengisi ukunika lonke ulwazi oludingayo ukuqala ukwenza imali ngexesha lokurekhoda. Kufuneka uthenge i-franchise kwaye wonwabele onke amava ayenziwe ngabanye abantu kudala ngaphambi kokuba uthathe isigqibo sokungena kweli shishini. Ewe kunjalo, kuya kufuneka ufumane i-franchise ehambelana nomdla kunye namandla akho. Umzekelo, ukuba awunayo imali yokuvula ikhonkco lokutyela, ngekhe ukwazi ukuthenga ilungelo lokuthengisa. Ewe, iinkampani ezibonelela ngethuba lokufumana i-franchise hlola abathengi abanokubakho, kwaye iimpazamo kule nkqubo zinqabile ngokwenene. Ukuba uthatha isigqibo sokufumana ilungelo lokushishina, ke ungulowo uthengisa amalungelo okuthengisa, umthengi othe ngqo wale modeli yeshishini.
Unokuba ngusomashishini kwaye usebenzise igama esele liviwa ngumntu wonke. Ukwafumana umxholo osele ulungile kwaye musa ukuyila nantoni na kwisilayidi esingenanto. Kwi-Russia, franchising ifumene ukuthandwa ixesha elide kwaye ngo-2021 yenye yeemodeli zeshishini ezibonakala ngathi zibonelela ngokulula emva kotyalo-mali. Ayisiyiyo yonke into elula kangako, nangona kunjalo, ukuthenga i-franchise kusese lula ngakumbi kunokwenza ishishini ekuqaleni. Ukuthintela iindleko zokuvelisa ilogo, ukuphelisa isidingo sokwenza isitayile sakho kunye noyilo, konke kwenza kube lula ukuhambisa imodeli yeshishini lakho. Kwanele ukuthenga ulwazi oluyimfuneko kwaye ulusebenzise ukonyusa ngokukhawuleza ivolumu yengeniso yohlahlo-lwabiwo mali.
Ukuthenga i-franchise akusoloko kuthetha ukuyithenga ngokusisigxina. Ungaqesha ithuba lokusebenzisa uphawu kunye nazo zonke izixhobo eziza nalo okwethutyana. Ngokwesiqhelo, ii-franchisees zihlawula umrhumo wesambuku. Umrhumo wesambuku uqondwa njengethuba lokusebenzisa uhlobo oluthile lomsebenzi wezorhwebo, imodeli esele ikhona yeshishini, ukufumana izibonelelo zemali. Unokwenza egameni lakho, usebenzise itekhnoloji esele ikho, usebenzise izixhobo ezingafunekiyo, kwaye ufake uphawu okanye uphawu. Isebenza kakuhle phantse kuyo nayiphi na indawo nakweliphi ilizwe. Nangona kunjalo, awunakuhlala ukwazi ukuthenga i-franchise kwaye uyikhuthaze kwingingqi yakho. Kuyimfuneko ukuba ufunde ngononophelo ukubakho kokusebenzisa olu hlobo lwentengiso kunye nemodeli yeshishini kwimeko yengingqi. Ukuba uthatha isigqibo sokuthenga i-franchise, kuya kufuneka rhoqo ukwenza uhlengahlengiso kwimodeli esele ikho.
Oku kunokuba lulongezo lwayo nayiphi na inkcaza encinci, ekhethekileyo, ebonakala kuphela kwingingqi yakho. Inika nokungena ngakumbi kubathengi kwaye into enjalo inokusetyenziswa njengenxalenye yomkhankaso wentengiso. Nje ukuba uthathe isigqibo sokuthenga i-franchise, kuya kufuneka uthathe amanyathelo ngokukhawuleza ukuze utyalo-mali luhlawule. I-franchise nayo inokuba luhlobo lokuqeshisa uphawu lwentengiso. Njengomthetho, isivumelwano esikhethekileyo senziwe phakathi komrhwebi kunye nomrhwebi. Le yinkqubo yendlela yokuthenga i-franchise. Ukhokelwa sisivumelwano ekusebenzeni kweofisi kwaye ishishini lakho liyenyuka.
Sicebisa ukuba uthenge kanye le franchise inomdla kuwe kwaye onokuthi unxibelelane ngayo nemveliso, kunye nokufumana uninzi lotyalo-mali lwakho. I-franchisor ifumana imali evela kuwe ngokusebenzisa uphawu lwentengiso okanye ukwazi. Unikezelo lwempahla eluhlaza zihlala zibonelelwa kwisivumelwano. Inkqubo yenkqubo, uqeqesho lwabasebenzi, konke oku kubandakanyiwe kwisivumelwano. Kwanele ukuthenga ilungelo elifanelekileyo. Ungayifumana i-franchise yokuxhaphaza onke amaqhinga awaziwayo ukuba adluliselwe kuwe kumthengisi. Imigaqo yokusetyenziswa kwebrendi yemveliso kukwaxoxwa ngayo ngokukodwa. Banokuba simahla kwaye bomelele, konke kuxhomekeke kwinjongo ezilandelwa ngamacala omabini. Umnini-franchisee uhlawula amatyala ngokunikwa ilungelo lokuqhuba ishishini ngelixa esebenzisa inkqubo ayisebenzisayo.
Awungekhe uthenge kuphela amalungelo okusebenzisa uphawu kodwa lonke ulwazi olongezelelweyo, itekhnoloji, kunye nohlobo lwezixhobo onokuzifuna ngexesha lomsebenzi wezomkhosi.
Ivenkile yeefranchise luhlobo lweqonga apho iintlobo ngeentlobo zonikezelo lwebranti zibekwa kwisebe labo ukuze zivulwe kwesinye isixeko okanye ilizwe. Ivenkile enjalo inokusetyenziswa ngabantu abafuna ukuphucula ishishini labo. Ivenkile enjalo ibonakaliswa bubukho benani elikhulu lezinto ezahlukeneyo kwifomathi yangoku. Ukuba unomdla kwii-franchise, ke ikwivenkile ekhethekileyo yefomathi ekufuneka uyikhangele. Kubalulekile ukuba ivenkile enjalo inenani elifanelekileyo lezinto ezifanelekileyo, kungenjalo, akukho sizathu. Iifranchise kunye nenkcazo yazo kufuneka zinikwe ingqwalaselo efanelekileyo, kwaye ivenkile iyakwazi ukunceda abantu abafuna ukufumana ithuba lokwenza imisebenzi ethile yeshishini ngokwesikimu esele sikhona.
I-franchise yinkqubo ethile okanye iseti epheleleyo yezinto ezahlukeneyo umthengi afumana ukuzikhulula nokuzazisa yedwa. Kwangelo xesha, inkampani ethengisa ilungelo lokuthengisa ayizincedi. Kukulungele ukusebenzisa ivenkile apho kubekwa khona ezo mpahla ukuze ukhethe eyona ifanelekileyo. Umzekelo, umtyali mali kufuneka athathe izibonelelo zemali kwaye ufuna ukuxhaphaza uphawu oluthile esele lusaziwa kwihlabathi liphela. Umtyalomali uya evenkileni kuphela kwaye akhethe imveliso emfanele kakhulu. Ukuba ivenkile enjalo inenkcazo eneenkcukacha ngefranchise, emva koko unokwenza isigqibo kwangoko kuloo ndawo. Imiqathango ihlala ixoxwa ngokukodwa, kwaye xa ilungelo lokuthenga lithengwa ngumthengi ngaphakathi kuphela evenkileni, ukhuphiswano lunokucwangciswa. Le yimeko ukuze umthengi akwazi ukukhetha ezona zilungileyo kubo.
Ivenkile yanamhlanje kufuneka isebenze ngokungenasiphako, kuba eli shishini libaluleke kakhulu. Iinkampani ezininzi ezifuna ukungena kwiimarike ezingabamelwane ziyakwazi ukufumana kule venkile. Ungayifumana nayiphi na i-franchise oyithandayo ukuba uya kwindawo yokugcina izinto enje. Oku kulunge kakhulu kuba lonke ulwazi oluyimfuneko lubonelelwe kwindawo enye. Ukudityaniswa kwazo zonke iifranchise kwiqonga elinye kuya kuba yindawo efanelekileyo enika ithuba lokuthenga ezona mveliso zifanelekileyo ngokweemfuno ezimiselweyo. Ukuba ufuna indawo yokugcina, indawo enjalo inokufumaneka kwi-Intanethi. Ngapha koko, kokukhona kungcono ivenkile, kokukhona kukho iifranchise ezingakumbi. Inani elikhulu lezindululo linika ithuba elifanelekileyo lokwenza ukhetho oluchanekileyo.
Inkcazo eneenkcukacha ye-franchise ikunceda uqonde ukuba iyahambelana nezinto ozikhethayo kunye nokuba kunokwenzeka na ukuyinyusa kwingingqi ethile. Ngaphakathi kwivenkile, uyakwazi ukuthelekisa iindlela ezahlukeneyo onokukhetha kuzo. Ngenxa yoko, kunokwenzeka ukuba ukhethe eyona ilungileyo. Enkosi kwivenkile enelungelo, oosomashishini abafuna ukutyala izibonelelo zemali kunye nokusebenzisa uphawu esele lukhona kunye nokwaziwayo bekwazi ukwenza izicwangciso zabo ngokukhawuleza nangokufanelekileyo. Kuya kubakho ukuhamba ngokulula ukuze ufumane ilungelo elifanelekileyo lokuthengisa. Ivenkile enjalo isebenza kwi-Intanethi, kwaye igama lezo brand zibekwe kuyo lixhomekeke kuzinzo kunye nokhuseleko. Ngokwendalo, indawo yokugcina izinto ezinjalo kufuneka ihlangabezane nazo zonke iimfuno zokhuseleko kwaye ibe nezatifikethi eziyimfuneko. Idepho yanamhlanje kufuneka ihlale inikezela ngolwazi olubanzi malunga neemveliso ezibonelelayo. Ivenkile yeefranchise ayikho ngaphandle kuba kufuneka ihlangabezane neemfuno zeemeko zangoku.
Enkosi ngeqonga elinjalo, unokusebenzisana ngokufanelekileyo nabameli beentlobo ngeentlobo zeempawu. Kuyenzeka ukuba uthethathethwano ukuba ivenkile ye-franchise yenzelwe kakuhle.
Xa ukhetha ivenkile ye-franchise, eyona nto iphambili ayikuko ukwenza impazamo, kuba lo ngumsebenzi obaluleke kakhulu kwishishini, kuba umtyali-mali ukhetha indawo apho aza kutyala imali khona. Ivenkile yeefranchise ibonelela nabani na ngeseti efanelekileyo yokunikezelwa okungafaniyo. Iifranchise zinokuphuculwa kuthathelwa ingqalelo izinto ezithile zommandla. Rhoqo, oku kuye kufuneke ukuba kwenziwe kwaye inkcazo eneenkcukacha yokuba yeyiphi imeko umthengisi ayibonelela kumthengi ekufuneka ebonelelwe kwivenkile. Amanyathelo anjalo avumela usomashishini onokubakho ofuna ukuzibandakanya kurhwebo ukuze enze isigqibo esifanelekileyo kweso sicwangciso.
Ikhathalogu ye-franchise luluhlu lwezindululo zangoku zophuhliso lweshishini ngokusekwe kuphawu esele lukhona. Ulawulo olunjalo lunokusetyenziswa ngusomashishini ofuna ukutyala imali kwaye akafuni ukwenza ishishini kwasekuqaleni ngaxeshanye. Ikhathalogu ilungele umntu onjalo. Yonke i-franchise kwintengiso ibhalwe apha. Enkosi kwikhathalogu enjalo, kunokwenzeka ukuba ukhethe eyona niche ifanelekileyo neyona ilungileyo. Ikhathalogu enjalo ikwenza ukuba kube lula ukunxibelelana nomthengisi kwaye ubuze imibuzo enomdla. Kwisakhelo sencwadi yesibonelelo sokuthengisa, ayizukuboniswa kuphela zonke izibonelelo ezifanelekileyo, kodwa nenkcazo yolu hlobo lwemveliso kufuneka ibekhona. Ngombulelo kwinkcazo, kunokwenzeka ukuba uthathe esona sigqibo sichanekileyo kwaye sinolawulo olufanelekileyo. Awunakho ukwenza ngaphandle kwekhathalogu yelungelo lokuthengisa ukuba umthengi onokubakho ufuna ukukhetha olona khetho lufanelekileyo.
Yeyiphi ikhathalogu ye-franchise enokusimahla okanye ehlawulwayo ixhomekeke kumnini wesiza. Kwangelo xesha, ii-franchisors ngokwazo zihlawulela ukubakho kokuthumela kweso siza okanye esinye isixhobo sokuhambisa ulwazi. Ngombulelo kwincwadi yesandla sokuthengisa, kunokwenzeka ukuba kutsale abathengi abatsha. Umthengi wefranchise ubizwa ngokuba ngumnini franchisee. Ufumana ithuba lokuqhuba ishishini ngokwesikimu esele sikhona, esinikezelwa kumthengi. Esi sikimu saphuhliswa ngumthengisi welungelo lokuthengisa, ngelixa umfama onelungelo lokugcina imali ethwala zonke iindleko ezifunekayo zokulungiselela, ukumilisela kunye nokusebenza kwento yeshishini. Oku kulunge kakhulu kwabo bantu banethuba lokutyala imali kodwa abafuni kuyila into entsha. Bathatha i-franchise esele yenziwe, ebalungeleyo. Kwelinye icala, ikhathalogu ikunceda wenze ukhetho lwakho, wenze esona sigqibo solawulo luchanekileyo, kwaye ufumane eyona mivuzo iphezulu kwiimali ezityaliweyo.
Kwikhathalogu ye-franchise, ungachaza ubungakanani bentlawulo yesambuku. Eli lixabiso le-franchise, esisigxina kwaye le franchisor ayifumana kumnini-franchisee kwinqanaba lokuqala. Oku kunokuba malunga ne-10% yazo zonke iindleko zokuqala. Kwangelo xesha, ngaphakathi kwesakhelo se-franchise handbook, unokuchaza iinkcukacha ezichaza imigaqo yokunxibelelana ngeenkcukacha ezithe kratya. Umzekelo, incwadi ekuthiwa yeyeshishini inokubonelelwa njengebhonasi. Ayisiyonto ngaphandle komgaqo oyiliweyo ovuma ukuququzelelwa kwemisebenzi ngendlela efanelekileyo. Umsebenzi ofanayo wenzelwe ukwakha isazisi esidibeneyo, ukumilisela intengiso, kunye neminye imisebenzi enxulumene nokunxibelelana nabathengi. Incwadi ekuthiwa yeyophawu ikunceda uhambe ngendlela yokunxibelelana ngokufanelekileyo nabathengi abanokubakho. Kuphela ngaphakathi kwesakhelo sekhathalogu ye-franchise, ezi zinto kufuneka zichazwe ngokweenkcukacha kwaye oku kunceda umthengi onokubakho enze isigqibo esifanelekileyo.
Ukuba ikhathalogu yee-franchise ihlaziyiwe, ke ikuluhlu lwazo zonke izibonelelo ezikhoyo kunye nabathengi abanokufumana ezona zilungileyo kubo. Ikhathalogu enjalo ivumela ukuthengisa ii-franchise ezingakumbi kuba zonke zikwisiza esinye. Ikhathalogu kufuneka yenziwe kakuhle kwaye yenziwe kakuhle. Amanyathelo anjalo enza ukuba kube lula ukuhambahamba kwaye enze ukusetyenziswa kwekhathalogu kube yeyona ndlela isebenzayo kwaye ibe mnandi kwindlela yomthengi. Ukuba ufuna ikhathalogu, kungcono ukuyidibanisa ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo. Iifranchise kufuneka zinikwe ingqwalaselo eyimfuneko yokuqinisekisa ukuba akukho zimpazamo ezibonakalayo ezivela kwinkcazo yazo. Ngombulelo kwikhathalogu yelungelo lokuthengisa, abathengi abaninzi abanokubakho bayakwazi ukufumana abathengisi babo kwaye ishishini liza kuqala ukuphuhlisa, kwaye onke amasebe amatsha aya kuvulwa kwizixeko ezikufutshane nakumazwe.
Ikhathalogu esebenzayo ye-franchise kufuneka ixhotyiswe ngokuhamba ngokulula kumsebenzisi ukuze akwazi ukufumana esona sisombululo silungileyo. Enkosi kwincwadi yesandla sokuthenga ngokuthenga ngemali wonke umthengi uyakwazi ukujongana nayo nayiphi na imisebenzi yabefundisi njengenxalenye yokufumana ulwazi olulungele bona.
Ishishini lokuthengisa ngokuthengisa kufuneka likhuthazwe phantsi kwemigaqo ebonelelwe ngumthengisi. Umthengisi ngenye indlela ubizwa ngokuba ngumrhwebi kwaye wahlukile ekubeni ilungelo lokuxhaphaza ulwazi okanye uphawu lwentengiso, ufumana isixa esithile semali kuloo nto ibizwa ngokuba yi-franchise. Kwangaxeshanye, kunyanzelekile ukuba ahlawule imirhumo, egqithiselwa kwilungelo lokuqhuba ishishini kusetyenziswa inkqubo ebonelelweyo. Iskimu siphuhliswa ngabameli be-franchisor, ngelixa zonke iindleko zokwazisa kunye nokulungiselela ishishini zithwalwa ngumzuzi ngokwakhe.
I-franchise, kwelinye icala, yinkqubo esebenzayo esebenzayo echaza ngokweenkcukacha zonke iinkqubo, iimeko, kunye nemiba, evumela ukuqhuba ishishini ngokufanelekileyo. Kwangelo xesha, inkqubo yokwenza ishishini kufuneka ithobele ngokungqongqo izicelo zommeli-franchisor. Kulapho i-franchise iba nefuthe kangangoko, kwaye ishishini linikwa isixa sokuqwalaselwa esikufunayo. Oosomashishini abaphumeleleyo banakho ukukopa ngokupheleleyo imisebenzi yabefundisi, kwaye abanye babo bade benze nokuphucula. Yonke imisebenzi kunye notshintsho kuyaxoxwa ngalo nomthengisi, njengoko le yimigaqo.
Emva kokugqitywa kwesivumelwano, kunokwenzeka ukuqala ishishini usebenzisa ilungelo lokuthengisa. Amanyathelo anje avumela umboleki ukuba akhawuleze enze ingeniso kutyalo-mali kuba ukurhweba ngemali akukho nto ngaphandle kotyalo-mali lwezixhobo zemali kwimodeli esele ikho, ephuhliswe kakuhle, kunye nengqinayo. Le modeli yeshishini ivumela ukusebenza ngokukuko kweofisi, kuthathelwa ingqalelo izinto ezithile zommandla. Ngamanye amaxesha i-franchise ayisebenzi nje ukuba iinkqubo zeshishini zakhiwe ngokungachanekanga okanye indawo ejikelezileyo ayihambelani naleyo yayikwilizwe lasekhaya leprojekthi.
Ishishini le-franchise linokubonwa yonke imihla kwizitrato zedolophu yakho. Inokuba yiyo nayiphi na ikhefi, ivenkile, indawo yokucheba iinwele, okanye omnye umbutho. Nditsho neeMcDonald's kunye neKFC ziifranchise ezinamanqanaba aphezulu okuthandwa ngabantu. Konke ukuvula i-franchise kunye nokwenza isenzo seshishini kulandela isikimu kuchazwe kwisivumelwano. Isivumelwano sigqityiwe ukulawula zonke iingxabano kwaye ukuze iqela ngalinye liwazi amalungelo kunye noxanduva lwabo. Ukuba uza kuqhuba ishishini le-franchise, kufanelekile ukukhetha olona hlobo lufanelekileyo lweshishini. Kwakhona, kuthathelwa ingqalelo izinto ezithile ezenziwayo kwingingqi yakho kubaluleke kakhulu. Njengomzekelo, sinokujonga ukuthengiswa kweepancake nguMcDonald's eRashiya. Ithuba langoku lokuqhuba ishishini lokuthengisa ngentengiso linika phantse amathuba angenamda okuphumelela kwabo bantu banemithombo yasimahla yemali kwaye bafuna ukutyala imali ngokufanelekileyo.
Olu hlobo lweshishini lusebenza ngakumbi kunokwazisa ngerhwebo kwasekuqaleni. Usomashishini othile sele ekwazile ukuphuhlisa imodeli enjalo kwaye wabelana ngamava akhe kwipesenti ethile. Oku kulunge kakhulu kuba ishishini lokushishina likunika ithuba elihle lokuba ungaziqambeli nantoni na entsha, kodwa usebenzise indlela esele ikho ephumeleleyo. Elo shishini ngokuqinisekileyo lisebenza ngokukuko ukuba yonke imisebenzi yokwenziwa yenziwa ngokwemigaqo ebekiweyo kwisivumelwano. Ishishini lokuthengisa ngokuthengisa liza kukhula ngesantya esiphezulu ukuba utshintsho kuvunyelwene ngalo nomthengisi, oluya kuthathela ingqalelo imimandla ethile.
Kulabo bafuna ukuqala ishishini lokuthengisa ngemali, indawo ekhethekileyo, ikhathalogu, okanye ivenkile iyafuneka, apho zonke izinto ezikhoyo ezikhoyo kwintengiso zibonelelwa. Ngoncedo lwekhathalogu, unokukhetha ngokulula eyona ndlela ifanelekileyo. Sebenza ngeshishini lokushishina, ukhetha olona lwalathiso lufanelekileyo apho unokujongana ngokufanelekileyo nomsebenzi owenzileyo. Enkosi kwishishini lokushishina yedwa, abantu abaninzi bayonyuse kakhulu imali yabo yokuqala. Emva kokutyala imali kwishishini lokushishina, unokuba nethemba lokufumana inqanaba eliphezulu lemali engenayo. Imbuyekezo kolu tyalomali ihlala iphezulu kakhulu. Yiyo le eqinisekisa inqanaba eliphezulu lokuthandwa kolu hlobo lweshishini. Uninzi lwabantu lufuna nje ukutyala izibonelelo zemali kwimodeli esele ivavanyiwe yaphuculwa kule minyaka idlulileyo.
Yabelana nabahlobo bakho okanye ugcine idilesi yeli phepha ngokwakho
Ulawulo lwesiza: info@FranchiseForEveryone.com
Youtube Ijelo leendaba
Ukuba ubona itypo, ukuyilungisa, khetha isicatshulwa esingalunganga ngempuku kwaye ucinezele iqhosha lokungena
Ukuba ubona itypo, cofa apha ukuyilungisa